DEG DEG: Madaxda ku shirsan Afisyoone oo qodobo isku afgartay & shirka weyn oo la ballaarinayo.
April 7, 2021 Xuseen 8
Madaxda dowladda Federaalka, kuwa maamul Goboleedyada iyo Guddoomiyaha Banaadir ayaa waxaa weli uu shir uga socdaa Teendhada Afisyooni ee Magaalada Muqdisho, kaasi oo Maanta dib u dilowday, kadib laba maalin uu hakad galay.
Waxaa shirkaan oo muddo labo cisho ah horay ugu baaqday looga arrinsanayaa ajandayaasha shirka guud ee lagu ansixinayo arrimaha doorashooyinka Soomaaliya, kaasi oo lagu jaangoyn doono doorashada dalka iyo xilliga ay qabsoomi doonto.
Ka qaybgalayaasha shirka ayaa muddooyinkii ugu dambeeyey is waydaarsanayey doodo kulkulul oo la xiriira ajandaha rasmiga ah ee shirka guud iyo sidii ay isugu soo dhowaan lahaayeen madaxda oo afkaar ahaan aad u kala dheeraaday muddooyinkii ugu dambeeyey.
Ilo ku dhow dhow shirka Afisyooni ayaa sheegaya in mabdi’iyan la isku raacay in shirka soo socda la ballaariyo oo furitaanka ka soo qeyb galaan Guddoomiyeyaasha Labada Aqal ee Baarlamaanka, Madaxweynayaashi hore, Ra’iisul Wasaarihii hore ee dalka, qeybaha kala duwan ee bulshada.
Madaxweyne Maxamed Cabdullaahi Farmaajo, Ra’iisul Wasaaraha Xukuumadda xil-gaarsiinta Rooble, dhammaan Madaxda dowlad Goboleedyada iyo Duqa Muqdisho ayaa ka qeyb galaya shirka haatan ka socda Teendhada Afisyooni.
WAA SHINBURIYAHOW HEESE
Kkkk shirku lama balaarinayee ee dadkaas lagu casumay waxey MARQAATI ka ahaanayaan waxa la saxiixi doono oo heshiis ah oo u dhaxeeya DOWLADA FADARALKA IYO MAAMUL GOBOLEEDYADA kkkkk waxaa laga rabaa in la yiraahdo WAA DOORASHO LOO DHAN YAHAY OO WADA OGOL AH. Good point
inta doorasho loo dhan yahay oo wada ogol ah waa in aan puntland ka sifeyno inan gumeedyada adigoo kale ah
Dhig magaca boqortooyada nasab dhimanyahow Farmaajo cuqdad daba u leefaa.
War wuxu waa uun gobol ka tirsan dalwaynaga Soomaaliya,magactada cudub ee iminka sida Puntland,Somaliland, Hirshabeele,Jubaland ,Galmudug,Koonfur galbeed,iyo gobolka Banaadir waa magacyo waa magacyo ku meel gaar ah oo ka dhashay bur- burkii Soomaaliya,msrkii la doono ayey haddaba la bedeli karaa ee waxba
ha ka dhigin wax aan la bedeli karin.
Iminka wax boqortooyo la yiraahdo oo micna samaynaya ma jirto taasi ayaa xaqiiqa ah.
Haddii 17 September 2020 iyo 16 Feb 2021 San waxba laga bedelayn,ankee hadduu Deni doqon hogaamiyo shirka maxay soo kordhinaysaa?
Heshiisyadaas miyaa la bedelayaa? MAYA Farmaajo ayuu soo celinayaa heshiiskaas
IN DOORASHADA LAGA WARWAREEGTO WAXBA TARI MAYSO. TPLF QURUNKII AY DHISATAY WAQTIGOODII WAA DHAMAADAY. VIVA TEAM FARMAAJO. MADAXWEYNAHA UMADA SOOMAALIYEED. WAXAAN KALE WAA MADAX QABIILEEDYO TUUGO AH EVERYONE KNOWS
Kkkkkk aniga waxaan hubba in aan ka xigo puntland adinga iyo dameerka aad dadka moodeen ee deni , sxb xisaabta ku darsoo sidii dumarkii uma faano, full stop